Ɛberɛ a Awurade gyee Dawid firii nʼatamfoɔ nyinaa ne Saulo nsam akyi no, ɔtoo saa dwom yi de yii Awurade ayɛ.
Nsɛm a ɛwɔ dwom no mu nie:
“Awurade yɛ me botan, mʼaban ne mʼagyenkwa;
me Onyankopɔn yɛ me botan; ne mu na menya banbɔ.
Ɔyɛ me kyɛm, me nkwagyeɛ mu ahoɔden ne me banbɔeɛ,
mʼabantenten, mʼagyenkwa, deɛ ɔgye me firi basabasayɛ mu.
“Mesu frɛ Awurade; ɔno na ayɛyie sɛ no,
ɛfiri sɛ, ɔgye me firi mʼatamfoɔ nsam.
Owuo asorɔkye twaa me ho hyiaeɛ;
ɔsɛeɛ yiri faa me so.
Damena nhoma kyekyeree me;
“Na mʼamanehunu mu no, mesu mefrɛɛ Awurade.
Aane, mefrɛɛ me Onyankopɔn pɛɛ mmoa.
Ɔtee me nne firii ne kronkronbea.
Me sufrɛ duruu nʼasom.